၂၀၂၀ နှဈသဈကူး စကား – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 31, 2019 January 1, 2020 web_master
၂၀၂၀ နှဈသဈကူး စကား
[ Zawgyi / Unicode / English ]
၂၀၂၀ နှစ်​သစ်​ကူး စကား
(၁) ငြိမ်းချမ်း​ရေးဆိုသည်​မှာ အညံ့ခံလက်​နက်​ချ​ရေးမဟုတ်​။ အညံ့ခံရုံသက်​သက်​ဖြင့်​ ငြိမ်းချမ်း​ရေး မရနိုင်​။ စစ်​မှန်​​သောငြိမ်းချမ်း​ရေး၏ အ​ခြေခံအုတ်​မြစ်​မှာ ကိုယ်​ပိုင်​ပြဌာန်းခွင့်​သာလျှင်​ဖြစ်​သည်​။ ထို့အပြင် (က) ကိုင်​ထား​သော လက်​နက်​များနှင့်​တကွ (ခ) မိမိတို့ ကိုယ်၌က ခိုင်​ကျည်​စွာ စွဲကိုင်လည်​ပတ်​​နေသည့်​အပြင်​ (ဂ) ၀န်းကျင်​​လောက ကပါ အသိအမှတ်​ပြုသည့်​ “ကိုယ်​ပိုင်​ပြဌာန်းပိုင်​ခွင့်​” ကမှသာလျှင်​ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်​ ​ရေရှည်​တည်​တံ့​သော ငြိမ်းချမ်း​ရေးကို တည်​​ဆောက်​နိုင်​ကြမည်​ဖြစ်​ကြောင်း သဘောတရားအရ သိကြရပေမည်။
(၂) ​နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ၊ တရားမဲ့ သတ်​ဖြတ်​ခံရ/​သေဆုံးရသူ အရပ်​သားတစ်​ရာ​ကျော်​၊ စွပ်​စွဲဖမ်းဆီးခံရသူ ငါးရာ​ကျော်​၊ အ​ရေအတွက်​ မသိရသည့်​ စစ်​​မြေပြင်​ကျဆုံးသူများ ၊ ​နေရပ်​စွန့်​ခွာ စစ်​​ဘေး​ရှောင်​ တစ်​သိန်း​ကျော်​တို့ နှင့်​တကွ တစုံတရာပြင်းထန်​​သောကာလ တစ်​နှစ်​တာကို ဖြတ်​သန်းခဲ့ပြီးပြီ။ ​ရောင်​ခြည်​သန်း​ပြီဖြစ်​​သော်​လည်း ဆက်​လက်​ပြင်းထန်လာဖွယ်​ ရှိပေသည်။
(၃) ဖိနှိပ်ခံရသည့် လက်ရှိ တည်ဆောက်ပုံ (establishment) တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုသည့် အလုပ်မူကား “ကိုယ်စားပြုခြင်း”နှင့်တကွ “ပြောပိုင်ခွင့်” အချို့ကို အပ်နှင်းပေးလိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား စေလွှတ်လိုက်ခြင်း ဆိုသည့် သဘော အဓိပ္ပာယ်ထက်မပို။ “လုပ်ပိုင်ခွင့်” အရေးအရာအထိ (ရခိုင်တို့အဖို့) မရောက်သေး။ သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၂၀ ရခိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မဖြစ်ကိစ္စသည် ရခိုင်လူထုတို့အဖို့ရာ ဖြစ်ချင်ဖြစ် မဖြစ်လည်းနေ ဟုသာ မှတ်ချက်ပြုလျှင်လည်း ပစ္စလက္ခတ်သဘော ဟူ၍ကား မဆိုနိုင်။
(​၄) စစ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေး ​ကြေငြာမည်​ ဆိုလျှင်​​ မြန်​မာစစ်​တပ်​အဖို့ combatant မဟုတ်​သူ မိမိတို့အရပ်​သားများအ​ပေါ် ဖိစီးလိုက ဖိစီးခွင့်​ ရလာမည်​ဖြစ်​​သော်​လည်း မြန်​မာစစ်​တပ်​၏ နယ်​​မြေစိုးမိုးမှုကို တဖန်​ ​မေးခွန်းထုတ်​ရန်​လိုအပ်​​ပေသည်​။ ​ပလက်​၀မြိုနယ်​မှသည်​ အမ်းမြို့နယ်​အထိ မည်​သူတို့ စိုးမိုးထားသည်​ဆိုသည်​ကို ​ကောင်းစွာသိကြ​သော ​မြေပြင်​​နေသူများ ​မေးမြန်းကြည့်​နိုင်​ကြ​ပေသည်​။ ​အမ်းမြို့နယ်​နှင့်​ ဆက်​စပ်​လျက်​ရှိ​နေ​သော သံတွဲခရိုင်​အတွင်းရှိ ရခိုင်​လူထုတို့သည်​လည်း လာမည့်​မုန်​တိုင်းအတွက်​ ပြင်​ဆင်​စရာ ရှိသည်​ တိုို့ကို ပြင်​ဆင်​အပ်​​လေသည်​။
(၅) လက်​ရှိလည်​ပတ်​​နေဆဲ အနိုင်​အထက်​ပြု ယန္တရားကြီးကိုဖြိုဖျက်​ပစ်​ရုံသာမက ပြည်​မ​နေ လူမျိုးကြီး၏ လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးတို့၏ စိတ်​နှလုံးတို့ထဲတွင်​ နက်​နက်​ရှိုင်းရှိုင်း စူးနစ်​၀င်​​နေသည့်​ အ​ခြေခံအယူအဆမှားများကို ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲနိုင်​ပါမှ ပြည်​​ထောင်​စု ဆိုသည်​ကို ဆက်​လက်​တည့်​တံ့​အောင်​ လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ကြဖွယ်​ရှိ​လေသည်​။ အကယ်တန္တု ရခိုင်​ပဲ့ထွက်​သွားပြီး​နောက်​ (သို့မဟုတ်​) ရခိုင်​သည်​ နိုင်​ငံထဲကနိုင်​ငံယောင်​ ဖြစ်​သွားပြီး​နောက်​ ကျန်​ရစ်​သည့်​ ပြည်​​ထောင်​စုကို​တောင်​မှ လက်​ရှိ ယန္တရားဖြင့်​ ဆက်​ထိန်းထားရန်​ မလွယ်​​တော့ချေ။
(၆) သို့ရာတွင်​ ၎င်းတို့ လက်​ရှိ သိုမှီးသိမ်းဆည်းထား​သော ​ဒေါသ၊ ​မောဟ၊ မာန်​မာန၊ အဘိဉ္ဇာတို့ကို ​ထောက်​ချင့်​ကြည့်​လျှင်​ စစ်​​တွေမြို့ကိုတောင် စိစိညက်​ညက်​​ကြေ​အောင်​ ထု​ထောင်းပစ်​ချင်​စိတ်​ မ​ပေါက်​​နေ ဟူ၍ကား မ​ပြောနိုင်​။
(၇) ရက္ခိုင့် အချုပ်​အခြာ အာဏာကျဆုံးမှု ၂၃၅-နှစ်​ပြည့်​​မြောက်​သည်​ကို မှတ်​မိသတိရလျက်​ တစ်​ပြိုင်​တည်းမှာ ၂၀၂၀ နှစ်​သစ်​ကူးအတွက်​ ကျွန်​​တော်​ ​မြွက်​ဆိုလို​သော သတင်းစကား ကား မုန်​တိုင်းကို ဆက်​လက်​ ကြံ့ကြံ့ခံ ဖြတ်​သန်းသွားကြရန်​ ဆိုသည့်​အ​ကြောင်း ဖြစ်​ပါသတည်း။
၂၀၁၉ ဒီဇင်​ဘာလ (၃၁) ရက်​​နေ့
[ Unicode / English Text below ]
(၁) ငွိမျးခမျြးရေးဆိုသညျမှာ အညံ့ခံလကျနကျခရြေးမဟုတျ။ အညံ့ခံရုံသကျသကျဖွငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး မရနိုငျ။ စဈမှနျသောငွိမျးခမျြးရေး၏ အခွခေံအုတျမွဈမှာ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့သာလြှငျဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ (က) ကိုငျထားသော လကျနကျမြားနှငျ့တကှ (ခ) မိမိတို့ ကိုယျ၌က ခိုငျကညျြစှာ စှဲကိုငျလညျပတျနသေညျ့အပွငျ (ဂ) ဝနျးကငျြလောက ကပါ အသိအမှတျပွုသညျ့ “ကိုယျပိုငျပွဌာနျးပိုငျခှငျ့” ကမှသာလြှငျ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှကျ ရရှေညျတညျတံ့သော ငွိမျးခမျြးရေးကို တညျဆောကျနိုငျကွမညျဖွဈကွောငျး သဘောတရားအရ သိကွရပမေညျ။
(၂) နှိပျစကျညှဉျးပနျးမှုမြား၊ တရားမဲ့ သတျဖွတျခံရ/သဆေုံးရသူ အရပျသားတဈရာကြျော၊ စှပျစှဲဖမျးဆီးခံရသူ ငါးရာကြျော၊ အရအေတှကျ မသိရသညျ့ စဈမွပွေငျကဆြုံးသူမြား ၊ နရေပျစှနျ့ခှာ စဈဘေးရှောငျ တဈသိနျးကြျောတို့ နှငျ့တကှ တစုံတရာပွငျးထနျသောကာလ တဈနှဈတာကို ဖွတျသနျးခဲ့ပွီးပွီ။ ရောငျခွညျသနျးပွီဖွဈသျောလညျး ဆကျလကျပွငျးထနျလာဖှယျ ရှိပသေညျ။
(၃) ဖိနှိပျခံရသညျ့ လကျရှိ တညျဆောကျပုံ (establishment) တှငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတို့ကို ရှေးခယျြတငျမွှောကျခွငျးဆိုသညျ့ အလုပျမူကား “ကိုယျစားပွုခွငျး”နှငျ့တကှ “ပွောပိုငျခှငျ့” အခြို့ကို အပျနှငျးပေးလိုကျသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြားအား စလှေတျလိုကျခွငျး ဆိုသညျ့ သဘော အဓိပ်ပာယျထကျမပို။ “လုပျပိုငျခှငျ့” အရေးအရာအထိ (ရခိုငျတို့အဖို့) မရောကျသေး။ သို့ဖွဈရာ ၂၀၂၀ ရခိုငျ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈမဖွဈကိစ်စသညျ ရခိုငျလူထုတို့အဖို့ရာ ဖွဈခငျြဖွဈ မဖွဈလညျးနေ ဟုသာ မှတျခကျြပွုလြှငျလညျး ပစ်စလက်ခတျသဘော ဟူ၍ကား မဆိုနိုငျ။
(၄) စဈအုပျခြုပျရေး ကွငွောမညျ ဆိုလြှငျ မွနျမာစဈတပျအဖို့ combatant မဟုတျသူ မိမိတို့အရပျသားမြားအပျေါ ဖိစီးလိုက ဖိစီးခှငျ့ ရလာမညျဖွဈသျောလညျး မွနျမာစဈတပျ၏ နယျမွစေိုးမိုးမှုကို တဖနျ မေးခှနျးထုတျရနျလိုအပျပသေညျ။ ပလကျဝမွိုနယျမှသညျ အမျးမွို့နယျအထိ မညျသူတို့ စိုးမိုးထားသညျဆိုသညျကို ကောငျးစှာသိကွသော မွပွေငျနသေူမြား မေးမွနျးကွညျ့နိုငျကွပသေညျ။ အမျးမွို့နယျနှငျ့ ဆကျစပျလကျြရှိနသေော သံတှဲခရိုငျအတှငျးရှိ ရခိုငျလူထုတို့သညျလညျး လာမညျ့မုနျတိုငျးအတှကျ ပွငျဆငျစရာ ရှိသညျ တို့ကို ပွငျဆငျအပျလသေညျ။
(၅) လကျရှိလညျပတျနဆေဲ အနိုငျအထကျပွု ယန်တရားကွီးကိုဖွိုဖကျြပဈရုံသာမက ပွညျမနေ လူမြိုးကွီး၏ လူထုလူတနျးစား အလှာအသီးသီးတို့၏ စိတျနှလုံးတို့ထဲတှငျ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး စူးနဈဝငျနသေညျ့ အခွခေံအယူအဆမှားမြားကို ပွုပွငျပွောငျးလဲနိုငျပါမှ ပွညျထောငျစု ဆိုသညျကို ဆကျလကျတညျ့တံ့အောငျ လုပျဆောငျနိုငျကွဖှယျရှိလသေညျ။ အကယျတန်တု ရခိုငျပဲ့ထှကျသှားပွီးနောကျ (သို့မဟုတျ) ရခိုငျသညျ နိုငျငံထဲကနိုငျငံယောငျ ဖွဈသှားပွီးနောကျ ကနျြရဈသညျ့ ပွညျထောငျစုကိုတောငျမှ လကျရှိ ယန်တရားဖွငျ့ ဆကျထိနျးထားရနျ မလှယျတော့ခြေ။
(၆) သို့ရာတှငျ ၎င်းငျးတို့ လကျရှိ သိုမှီးသိမျးဆညျးထားသော ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာနျမာန၊ အဘိဉ်ဇာတို့ကို ထောကျခငျြ့ကွညျ့လြှငျ စဈတှမွေို့ကိုတောငျ စိစိညကျညကျကွအေောငျ ထုထောငျးပဈခငျြစိတျ မပေါကျနေ ဟူ၍ကား မပွောနိုငျ။
(၇) ရက်ခိုငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကဆြုံးမှု ၂၃၅-နှဈပွညျ့မွောကျသညျကို မှတျမိသတိရလကျြ တဈပွိုငျတညျးမှာ ၂၀၂၀ နှဈသဈကူးအတှကျ ကြှနျတျော မွှကျဆိုလိုသော သတငျးစကား ကား မုနျတိုငျးကို ဆကျလကျ ကွံ့ကွံ့ခံ ဖွတျသနျးသှားကွရနျ ဆိုသညျ့အကွောငျး ဖွဈပါသတညျး။
၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာလ (၃၁) ရကျနေ့
2020 New Year Message from U Kyaw Zaw Oo
(1) Surrender (relinquishing arms) cannot be interpreted as “peace”. Peace cannot be achieved by means of surrender. The foundation of genuine peace is self-determination. And theoretically,alasting peace forasociety can only be made by some combinations of three functions, namely (a) arming the State, (b) maintaining and operating the self-determination by the State itself, and (c) acknowledgment of the State’s self-determination by neighboring powers.
(2) A turbulent year has just passed, going throughaperiod of tortures, ofahundred civilian deaths in extra-judicial killings, of five hundred detainees of which some are by arbitrary arrests, of unknown number of KIAs, of one hundred thousand IDPs. Though dawn has lined the horizon, the turbulence still seems to continue.
(3) In this oppressive establishment, electing of MPs is not more than selecting and sending our representative agents on behalf of the public, endorsing them with “representation” and some “freedom of expression”. Elections are not yet for installing “executive powers”, at least for the Arakanese. Pondering upon the plausibility of 2020 election in Arakan is not of much importance to the Arakanese, and sucharemark could not be regarded as careless and unwise.
(4) By imposingamarshal law administration in Arakan, Tatmadaw might be able to exercise more grip on non-combatant civilian population if they want. But their actual dominance on the ground has yet to be questioned. As to who is in control of the area stretching from Paletwa Township to Ann Township, residents on the ground in that area can give very clear answers. Arakanese residents in Thandwe District, which is adjacent to Ann Township, should get themselves ready for the imminent storm.
(5) This so-called Union of Burma can only be maintained if and only if the currently functioning oppressive mechanism is demolished and many deep-rooted misperceptions in the minds of the people of the country’s ethnic majority are eradicated as well. Or suppose Arakan breaks away or becomesaquasi-nation inabigger nation, the current mechanism can no longer be able to maintain even the rest of the Union intact.
(6) Taking into consideration the amount of their wrath, their delusion, their arrogance and their greed which they have stored in their hearts, we cannot be sure whether they are fancying they will even destroy Sittwe into mere dust.
(7) Commemorating, at the same time, the fall of the Arakanese Sovereignty 235 years ago today as well, my 2020 New Year message is “let us survive the storm”.
Previous ဘူးသီးတောငျ နောကျခံ၊ nld ကိုရဲသိနျး နဲ့ အဝေးမွငျ အနီးမွငျ
Next လကျကိုငျတုတျ တဖွဈလဲ ဖိနှိပျရေးသမား အခှငျ့အရေးသမားမြား မဖွဈစလေို